Aqalka Congress-ka oo ku heshiiyay cunqabateyn cusub oo Ruushka la saaro | Berberanews.com
Home WARARKA Aqalka Congress-ka oo ku heshiiyay cunqabateyn cusub oo Ruushka la saaro
Hoggaamiyeyaasha labada xisbi ee aqalka Congress-ka Mareykanka ayaa gaadhay heshiis sharciyeed si aad ah u xaddidaya awoodda madaxweyne Trump ee ah inuu cunaqabateynta ka qaado Ruushka.
Aqalka Wakiillada ayaa lagu wadaa in maalinta salaasada ah uu cod u qaado hindise-sharciyeed oggolaanaya cunaqabateyn cusub oo lagu soo rogo xukuumadda Moscow, si loogu ciqaabo faragelinta ay ku sameysay doorashadii madaxtinnimo ee Mareykanka.
Madaxweyne Trump ayaa hore ugu baaqay Congresska inay u oggolaadaan in xidhiidh diplomaasiyadeed oo xor ah uu la yeesho Ruushka. Balse Wakiillada ayaa sheegaya in heshiiska labada xisbi uu tusaale u yahay go`aanka adag ee Congresska uu ka gaadhay in dhinac looga soo wada jeesto Moscow, iyadoo aan la eegeynin aragtida madaxweyne Trump.
Aqalka Kremlin ayaa dafiray eedeyntii loo soo jeediyay, balse baadhayaal badan oo Mareykan ah ayaa eegaya haddii uu Ruushku lug ku lahaa ololihii doorashada madaxweyne Trump.
Previous articleXukuumadda oo ciidan dul dhigtay Beelo ku dagaallamay Ceel-afweyn
Next articleBerbera oo diyaarad lagaga daabulay qaxoonti Somaliyed oo Yemen ka soo cararay